CTUM Workshop on Labour Law Reform – CTUM
CTUM Workshop on Labour Law Reform
Second Congress of Yangon Industrial Workers Union
CTUM is holdingaworkshop on amendment of The Workmen’s Compensation Act, 1923 and The Employment, Skills and Development Law on 27-28 August, 2018.The CTUM’s members from Industrial sector (IWFM), Building and Wood sector (BWFM), Mining sector (MWFM), Agriculture sector and Transport sector (MTF/MRWUF) , CTUM lawyer andapensioned experience mining workers, in total (28) workers attended the workshop. The result of the workshop will be submitted to CTUM. The CTUM is preparing for CTUM proposal for Workmen’s Compensation Act and Employment Skills and Development Law amendment.
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်၊ CTUM သွေးစည်းညီညွှတ်ရေးခန်းမတွင် အလုပ် သမားဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၇-၂၈) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် CTUM အနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရ ရရှိမှု၊ သေဆုံးမှု၊ လုပ်ငန်းခွင် ရောဂါရရှိမှု၊ သေဆုံးမှုဆိုင်ရာ အလုပ်သမားလျော်ကြေးငွေ ဥပဒေနှင့်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်လိုသည့်အချက်များကို တင်သွင်းရန် ပြင်ဆင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းဆွေးနွေးပွဲအား ကဏ္ဍအလိုက်အဖွဲ့ချုပ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း (၂၈) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျား (၂၁)ဦး မ (၇)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကဏ္ဍ အလိုက်အဖွဲ့ချုပ်များမှာ-
1. မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့် စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (IWFM)
2. မြန်မာနိုင်ငံသတ္တုတွင်း အလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (MWFM)
3. မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးနှင့် သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (BWFM)
4. မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (AFFM)
5. မြန်မာနိုင်ငံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (MTF) တို့မှ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် သတ္တုတွင်းကဏ္ဍမှ လုပ်သားဟောင်းကြီး ဦးတင်ထွန်း၊ CTUM ဥပဒေပညာရှင် ဒေါ်အိန္ဒြာကြည်တင်၊ တို့မှလည်း တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့ (၂၇) ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား လျော်ကြေးငွေ ဥပဒေ မူကြမ်းတွင် ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်လိုသည့်် အချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ (၂၈) ရက်နေ့တွင် အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေတွင် ပြင်ဆင်လိုသည့် အချက်များကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ မတူညီသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍများမှ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ ပါဝင်စေရေးအတွက် ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။
CTUM is holdingaworkshop on amendment of The Workmen's Compensation Act, 1923 and The Employment, Skills and…
Posted by Ctum Myanmar on Monday, August 27, 2018